माधव नेपाल माथि गोकुल बाँस्कोटाको कटाक्ष, ‘कहाँबाट जन्मे माधव नेपाल, अवैध सन्तान हुन् उनी ?’ – Sunaulo Nepal TV
काठमाडौ । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटा निकै कडा टिप्पणी गर्ने नेता मध्य पर्छन । उनका अभिब्यक्ति निकै चर्चित हुन्छन् । जति आलोचना गरेपछि टिप्प्णी गर्न भने नछोड्ने उनको स्वभाव छ । नेकपा एमाले विभाजन भएर माधव कुमार नेपालले अर्कै पार्टी दर्ता गरेपछि एमाले नेताहरुले सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने पनि माधव नेपाललाई नै हो ।
एक कार्यक्रममा पोखरा पुगेका बाँस्कोटाले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेका त्यसका अध्यक्ष माधव नेपालको राष्ट्रिय परिचयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। एमालेवाट राष्ट्रिय परिचय बनाएर एमालेकै नाम सुन्दा समेत नाक खुम्च्याउने गरेको भन्दै उनले नेपालको टिप्पणी गरे । एमाले भन्दा नाक खुम्चिन्छ रे ? हिजो सुने मैले, कहाँबाट जन्मे माधव नेपाल। माधव नेपालको जन्म कहाँबाट भएको ? अचम्म लाग्छ।
उनले नेपाललाई एमालेको वैध सन्तान भए त्यसरी नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था नरहने टिप्पणी गरे । उहाँको बुवाले त जन्माउनुभयो। उहाँको आमाले जन्माउनुभयो,ु उनले भने, ुतर माधव नेपालको राष्ट्रिय परिचय कहाँबाट बन्यो। स्रोत जग र कोख त एमाले हो। कि अवैध सन्तान हुन् उनी ? नभए एमालेको वैध हो भने एमाले भन्दा नाक खुम्चिन्छ ? बेइमानी पनि, पखाण्डीको पनि सीमा हुन्छ नि।
Previous चट्याङ लागेर ६० वर्षका मुमबहादुर सार्कीको मृत्यु, तीन घाइते
Next प्रेमीसँग मिलेर आफ्नै श्रीमानको क्रु,‘र ह,‘त्या गरिन, शवलाई टु,‘क्राटुक्रा पारेर केमिकल हालेर सिध्याइन्